Messi iyo Ronaldo: Xiddigo Rikoorradoodu iska daba dhow yihiin – Gool FM
(Barcelona), 20 Okt 2016 –Kaddib markii xalay Weeraryahanka kooxda Barcelona Lionel Messi uu saddex gool ka dhaliyay kooxda Manchester City ciyaartii labada kooxood ee ka tirsanayd UEFA Champions League ayaa goolashaasi waxa uu Messi ku xaqiijiyay saddexleydiisii 41-aad intii uu ciyaaraha ku jiray.
Saddexleydani ayaa 37 ka mid ah waxa uu Messi u dhaliyay Barcelona, halka 4 kalena uu u dhaliyay xulka dalkiisa Argentina.
Xidigga kale ee Real Madrid weerarka uga ciyaara Cristiano Ronaldo oo ay mar walba wada xafiltamaan Messi ayaa waxaa mid waliba kan kale wuxuu ku taamayaa siduu ku dhaafi lahaa iyadoo goolasha Hat-trick ah ee uu Ronaldo dhaliyay guud ahaan yihiin 42, waxaana 37 ka mid ah uu ka dhaliyay Real Madrid, 1 Manchester United iyo 4 Qaranka Portugal, sida ay xaqiijisay Opta.
Marka ay timaaddo dhinaca gool dhalinta Ronaldo ayaa waxa uu dhaliyay 557 Gool intii uu ciyaaraha ku jiray, halka Messi uusan ka yareysan oo uu leeyahay 521 Gool.
Hoos ka eeg sida Messi iyo Ronaldo Rikoorradoodu isaga daba dhow yihiin iyo meelaha ay ku kala duwan yihiin:
SAWIRRO: Guruubka C ee koobka Janeraal Daa’uud oo galabta la soo gaba gabeeyay